Ibhulogi Juan Herranz
Izibuyekezo zamamuvi. Konke mayelana namafilimu ahamba phambili abaqondisi abaningi, kanye nombono wami nokugxeka ukudlala kwabalingisi.
Ama-movie aphezulu angu-3 ka-Ewan McGregor
Ngemuva kwabalingisi abakhulu besinema kunomugqa wesibili ogcwele abalingisi nabalingisi abamagange ukungena esenzweni ukuze bahlwithe inqwaba yenkazimulo yesinema ku-Pitt, Deep, DiCaprio kanye nenkampani. U-Ewan McGregor ungomunye wabalingisi abaqinile, abaqinile. Utolika okwazi…
Amafilimu ama-3 aphezulu kaRussell Crowe
Kuyafaneleka ukuthi uRussell Crowe aphonse amahloni amaningi njengomthombo wezigcawu zakhe eziningi. Futhi kuyafaneleka ukuthi kubonakala sengathi ishiywe ngokomzimba eminyakeni yamuva (noma okungenani lokho okushiwo phambi kwalokho okungenzeka kube enye inkinga noma ngisho nezidingo zombhalo). Kodwa cha...
Amafilimu ama-3 ahamba phambili ka-Javier Cámara
Kimina kubonakala sengathi i-cinema yaseSpain inentando yeningi kakhulu, ilungiswe kakhulu neqiniso lezinto ezinhle zokulingisa. Ukuyiqhathanisa neHollywood, ngisho. Ngoba e-yankeeland uma umuhle ungafunda ukwenza okuthile empukaneni, kuyilapho ukhazimulisa umbukeli kusuka kokubonakalayo kuye ...
Amamuvi angu-3 ahamba phambili ka-Daniel Day-Lewis
Njengoba isikhathi sihamba, sizolahlekelwa ubuhlakani bokuhumusha njengoDaniel Day-Lewis. Kungaba yindaba yalowo mfutho ayethatha ngawo indima ngayinye, iphuzu ukuthi mhlawumbe wayehlushwa yilokhu kuguga okuvame ukuhlasela labo abashiya yonke into kunoma iyiphi ingxenye ...
Amafilimu amathathu aphezulu kaRobert de Niro
Ake sikhohlwe ngoRobert de Niro wokugcina ukuvusa omunye umlingisi omkhulu ukuthi wayekhona ngesikhathi esithile. Kungase kuzwakale kunokhahlo kodwa kunjalo, enye yezinhlobo ezithakazelisa kakhulu ze-celluloid sekuyisikhathi eside yadlula ngosizi olukhulu kunenkazimulo yamafilimu angenayo lelo phuzu le-cinema yakudala ...
Ama-movie aphezulu angu-3 kaJack Nicholson
Kusukela ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi okusagolide phansi kwethrekhi yeLakers, uJack Nicholson usabonisa amandla amangalisayo ayehlale ewanika abalingisi bakhe. Izincazelo ezivela kuma-70s akude nangokwengqondo kuze kube yikhulu lama-XNUMX. Umgijimo ongefaniswe nezihlabani zanamuhla...
Ama-movie aphezulu we-Matt Damon angu-3
Uma kukhulunywa ngokufaka ikhathalogi uMat Damon singathola izinkinga. Akulula ukubiza umfana onjengaye, ongaphasela umngane wakho wobuntwana obungeke umcabange edlala iqhawe lefilimu futhi unciphise i-heartthrob yohlobo luka-Brad Pitt. Futhi kunjalo...
Ama-movie ama-3 aphezulu ka-Jennifer Lawrence
Umlingisikazi oqoqa amarejista okutolika njengokungathi ubuhle bakhe be-chameleonic yinto elula ukukusebenzisa. Akungabazeki ukuthi uJennifer Lawrence angajabulisa umqondisi omkhulu wesikhathi esidlule njengoHitchcock. Ngoba kuyo singathola leso sizinda esingalindelekile ukuthi i-cinema ihlale ifuna njengento emangazayo. Okuthile…
Amafilimu ama-3 ahamba phambili ka-Luis Tosar
Kunabalingisi abaphelele baziphi izinhlobo. U-Luis Tosar kanye nokungabaza ngomqondo wako obanzi kungenye yezingxoxo ezijabulisa kakhulu ku-cinematography yaseSpain. Futhi ukuthi lo mlingisi waseGalicia angahlanganisa ububi kunoma yiziphi izethulo zakhe; noma ngokuphambene nalokho,...
Ama-movie aphezulu angu-3 kaKeanu Reeves
Kunzima ukucabanga ngo-Keanu Reeves futhi usheshe umbeke ku-stereotype ethile yomlingisi. Kungakhathaliseki ukuthi yizinqumo zakhe, eqhutshwa izimfuno zomsebenzi noma, yebo, ukuziphendukela kwemvelo okuhumushayo, uKeanu osemdala ubelokhu ezisungula kabusha ngesivinini esiphoqelelwe. Kulowo mfana onekhava yesithombe sakhe...
Amafilimu ama-3 ahamba phambili e-Mario Casas
Ngo-Mario Casas kwenzeka okuthile okungajwayelekile kimi. Ngakolunye uhlangothi, ngicabanga ukuthi ungumdlali omuhle, kodwa ngakolunye uhlangothi, umlingisi ofanayo uhlala evezwa kimi, kungakhathaliseki ukuthi indima engiyidlalayo. Kumelwe kube yindaba yokuba khona kwakhe okuphawulekayo noma iphimbo lakhe eliphansi, njengomzamo wokuhleba ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi6 Okulandelayo →